July 9, 2019 - POPPIN NEW
Victoriaလေး အမှုဖြစ်တဲ့နေ့က ဒရိုက်ဘာအောင်ကြီးရဲ့ လှုပ်ရှားမှု စီစီတီဗွီ (CCTV) ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်လာ
Victoriaလေး အမှုဖြစ်တဲ့နေ့က ဒရိုက်ဘာအောင်ကြီးရဲ့ လှုပ်ရှားမှု စီစီတီဗွီ (CCTV) ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်လာ Victoria လေးရဲ့ အမှုကတော့ ပြည်သူအားလုံးစ်တ်ဝင်စားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရားခံကို ယာဉ်မောင်းအောင်ကြီးဆိုပြီး CID ကတော့ စွဲချက်တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် မြို့ကြီးတွေမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့ အောင်ကြီး မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထင်ကြေးပေးကြသလို ဘီဘီစီ ကလဲ အောင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ကြောင်း Video နဲ့ရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဘီစီ …
သေပြီးသား လူတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်ကနေ ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံ (၇)မျိုး…
ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါ သူတို့ကို သတိရတဲ့စိတ်ကတော်တော်နဲ့ မလျော့သွားပါဘူး။ ပြီးတော့ သေဆုံးပြီးတဲ့သူက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့သူတွေကို အိပ်မက်ပေးပြီး ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတတ်ကြတယ်လို့လည်း ယူဆတတ်ပါတယ်။ တကယ်ရော အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိပါ့မလားဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ဆုံးပါးသွားတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်ကတဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားလာရင် ဒီအချက်လေးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်ပါတယ်နော်. (၁) အိပ်မက်ကနိုးလာချိန်မှာတစ်ယောက်ယောက်စိုက်ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ် ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပေမယ့် သူတို့တွေကိုယ့်အနားမှာရှိနေတုန်းပဲလို့ စိတ်ထဲကနေထင်နေတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ …
မုဒိန်းမှုမှ DNA ကိုလှည့်ဖြားခြင်း (ဒီလိုဖြစ်​ရပ်​မျိုး တစ်​ကယ်​ရှိခဲ့ပါတယ်​) ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ ကနေဒါနိုင်ငံက ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့လူနာဖြစ်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဆေးကုသခန်းထဲမှာပဲ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ အမှုကျူးလွန်စဉ်က လူနာအမျိုးသမီးကို ရုန်းကန်အော်ဟစ်ခြင်းမပြုနိုင်အောင် စိတ်ငြိမ်ဆေးအပြင်းစားတစ်မျိုးပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးက ရဲစခန်းမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်တဲ့အခါ အခြားသံသယရှိစရာ အချက်များရှိခဲ့ပေမယ့် DNA စစ်ချက်မှာတော့ ဆရာဝန်ရဲ့ DNA ဟာ တရားခံရဲ့ DNA …
”ချစ်သူကိုအပိုင်ပေးဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ”
ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့ မိန်းကလေးများဟာ အရင်ကထက် ပိုလှလာသလို ပိုပြီးလည်း ရင့်ကျက်လာကြပါတယ်။ ၆ နှစ်ခန့်တွဲခဲ့တဲ့ ရည်းစားဖြစ်သူ နဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက် ပန်ကိတ်ဒါဒါတစ်ယောက် အရင်ကထက် ပိုလှလာခဲ့ပါတယ်။ပိုလှလာရုံမကဘဲ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာမှုကြောင့် ပရိသတ်တွေပိုမို ဝန်းရံလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။စကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ အကြံပေးချက်လေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဖော်ပြလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပန်ကိတ်ကတော့ပိုပိုလှလာလာရုံတင်မကဘဲ ပညာရေးဘက်မှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …
ဆရာမ မနှင်းနု ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ပြောပြလာတဲ့ ဖခင် ဦးဝင်းမြင့် ….. ကုမုဒြာ။ ။အခု ဆရာမ မနှင်းနုက ထွက်ပြေးသွားပြီ ပျောက်သွားပြီ ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်။အဲတော့ အခု ဆရာမ မနှင်းနု ဘယ်မှာ ရှိနေလဲ ပြောပြပေးပါဦး။ ဦးဝင်းမြင့်။ ။တရားစခန်းမှာ ဝင်နေပါတယ်။ ကုမုဒြာ။ ။တရားစခန်းက ဘယ်တုန်းက စဝင်တာလဲ။ဘယ်နှစ်ရက်လောက် ရှိပြီလဲ။ …
ပြည်ထဲရေးကားနဲ့ မန္တလေးဘက်ကို ခေါ်သွားတယ် …။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မီဒီယာတွေ ဒီတခါမေးမြန်းတာခံရရင် ပြည်ထဲရေးလိမ်နေတာတွေ အစထွက်မှာစိုးလို့အောင်ဝင်းခိုင်ကို အစဖျောက်သလို ဘယ်သူမှမတွေ့နိူင်တဲ့နေရာကိုပို့ လိုက်တာ …. အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မနက် ကျောင်းကားဖယ်ရီလေးလာတယ် Victoria လေးလဲပါလာတယ် ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် သားအငယ်ကောင်လဲ ပါလာတယ် ကျောင်းရောက်တယ် ကလေးတွေဆင်းတယ် ဟို မုဒိမ်းကောင်လေးက Victoria လေးကိုခေါ် ကစား …
WH ကျောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်သူ သီရိမေ ပွဲကြမ်းနေတယ် ဘာတွေလားတော့ မသိဘူး😁 ပရော် ပရော် ပရော် ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ဆန် ပြောတာနေတာပါလို့🙃🙃🙃 crd ဘာတေဖြစ်နေကြလဲတော့မသိဖူး ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးသာ ကြည့်လိုက်ကြတော့….. video ဖိုင်ကြည့်ရန် ######### #ထောင်သူရဲဘအုပ် …………………………. unicode WH ကြောငျးကိစ်စနဲ့ပတျသကျသူ သီရိမေ ပှဲကွမျးနတေယျ ဘာတှလေားတော့ မသိဘူး😁 ပရျော …
Group Chat ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီး အကောင့်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့ Wisdom Hill ပိုင်ရှင်၏ညီမဖြစ်သူ သီရိမေ …..
Group Chat ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီး အကောင့်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့ Wisdom Hill ပိုင်ရှင်၏ညီမဖြစ်သူ သီရိမေ ….. Wisdom Hill ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာအပြန်အလှန်ဖြေရှင်းနေကြတာကိုစာဖတ်သူတွေသိပြီးသားဖြစ်သလို ကျောင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ သီရိမေဟာလည်း အမှုကိစ္စဖြစ်ကတည်းက အမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုများကိုလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှတွေ့မြင်ရနေရတာဖြစ်ပါတယ် ယခုအချိန်ထိ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုမှာ အမှုမှန်မပေါ်သေးပဲ ယာဉ်မောင်းအောင်ကြီးအား တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုအမှုကိစ္စတွေကြားထဲမှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးကဲ့သို့ လိင်အကြမ်းဖက်မှုခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သဇင်ထက်ရဲ့သားလေးရဲ့အဖြစ်အားအမေဖြစ်သူမှလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာရေးသားရင်းနဲ့ ကျောင်းအုပ်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ သီရိမေနှင့်အခြေအတင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ထိုသို့အခြေအတင်ဖြစ်ပီး …
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုထက်ပိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံကသမီးလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုထက်ပိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံကသမီးလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု နေပြည်တော်သမီးလေးအမှု.ထက် အဆ ပေါင်းများစွာဆိုးဝါး၇က်စက်တဲ. မင်္ဂလာဒုံက သက်ငယ်မုဒိမ်းကျင်.ခံ၇ပြီး၇က်စက်စွာအသတ်ခံ၇တဲ. သမီးငယ် မဇာခြည်ဖြိုး အသက် ၅ နှစ်ပါ၊၊ အခု ၆ လကျော်ကြာမြင်.လာသည်.တိုင် တ၇ားခံမပေါ်သေးပါ၊၊ ပြည်သူတွေက သိ ပြည်သူတွေက အော်မှ အလုပ်ထလုပ်ကြတဲ. ၇ဲတွေ၇ှိတဲ. ဒီနိုင်ငံမှာ သမီးလေးအမှု.ကတော့ လူမသိ သူမသိ တိမ်မြှုပ်နေပါပြီ၊၊ ဘယ်လိုပဲတိမ်မြှုပ်နေပါစေ …